I-china i-antibacterial electret masterbatch mveliso kunye nabenzi | Langyi
I-Electrode yinto yedizili esebenza ngokugcina ixesha elide kwentlawulo kwaye ikhupha ii-ion ezimbi. Intlawulo egciniweyo inokunyusa i-electrostatic adsorption yeemaski kunye nokucoca ii-ion ezingalunganga, kuthintela ngokufanelekileyo amagwebu, uthuli, ibacteria kunye neerosol engezantsi kwemicron. Isilivere ion antibacterial arhente luhlobo lwe-eneji ephezulu yokusebenza kwamandla okulwa ne-anti-virus, enefuthe elifanelekileyo le-bactericidal kwi-Escherichia coli, iStaphylococcus aureus, i-Candida albicans, iPneumococcus, i-pseudomonas aeruginosa, njl njl. iintlobo zomngundo kunye neentsholongwane ezineprotein capsid.
I-Mp203-ly95 inyibilikisi yokunyibilika kunye nokutshiza i-electret masterbatch ithatha ukunyibilika kunye nokutshiza i-polypropylene njengezinto ezisisiseko, yamkela izixhobo ezisasazekayo kunye nezixhobo ezikhethekileyo zokuxuba, ukuze i-nano electret eyongezelelweyo kunye nesilivere ye-arhente ye-antibacterial isasazwe ngokulinganayo ekunyibilikiseni nasekutshizeni izinto ezisisiseko se-polypropylene. Le mveliso inokunyusa uxinano kunye nobunzulu bokubambisa ukurhola kumgibe wokunyibilikisa ilaphu elingalukanga, ikhuphe ii-ion ezimbi kunye nentlawulo yokugcina ngokufanelekileyo, kwaye iphucule ukusebenza kokucoca ulwelo lwencindi yokunyibilikisa kunye nokusebenza kokuxhathisa ukufuma kunye nokunciphisa ubushushu be-electrostatic. Ukongeza, le mveliso yongeza umsebenzi omtsha we-anti-bacteria kunye ne-anti-virus kwi-melt spray ilaphu elingalukanga, elonyusa kakhulu ukhuseleko lwemaski.
■ Impembelelo elungileyo yeelectropole inokunyusa uxinano lwentlawulo yombane kwaye incede ukuphumelela kuvavanyo lwama-95;
1. Ukusebenza okumileyo kwexesha elide, ukuya kuthi ga kwiminyaka emi-3.
■ Ukuzikhusela ngokwakho
1. inefuthe elihle le-bactericidal kwi-Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pneumococcus, Pseudomonas aeruginosa, njl .;
2. Inesiphumo esihle sokuthintela ukungunda kunye neentsholongwane.
■ ngomsebenzi olungileyo wokulungisa
1. Izongezo zenqanaba le-nano azifaki mingxunya, kwaye inkqubo izinzile
2. Akukho sidingo sokongeza izixhobo ezitsha, akukho sidingo sokuhlengahlengisa kakhulu inkqubo yokunyibilikisa ekhoyo.
3. Ayichaphazeli umjikelo oqhelekileyo wokucoca kunye nobomi benkonzo ye-spinneret.
■ Ukhuselekile, usempilweni kwaye awukhuthazi
ukunyibilika kwebacteria kunye nokutshiza i-electret masterbatch
Egqithileyo Ifayibha yokulwa neentsholongwane
Okulandelayo: I-masterbatch ye-antibacterial melt-blown master
Antibacterial Electret Masterbatch, Antibacterial Masterbatch, Intambo ye-Antibacterial, Ummeli wePolymeric Antihydrolysis, Antibacterial ingubo ephothiweyo, I-Masterbatch ye-Antibacterial Melt-Blown Masterbatch,